एन्फामा अहिले पनि गणेश थापाकै हकैम छ :: Tarun Khabar: Digital Online Paper from Nepal
एन्फामा अहिले पनि गणेश थापाकै हकैम छ
अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा) मा वरिष्ठ उपाध्याक्ष चयन विवादमा परेको छ । एन्फाले मणी कुँवरलाई वरिष्ठ उपाध्यक्ष पद दिने निर्णय गरेसँगै विवाद सिर्जना भएको हो । उपाध्यक्ष राई र दुई कार्यसमिति सदस्यले यो निर्णयको विरोध गरेका छन् । एन्फा अध्यक्ष नरेन्द्र श्रेष्ठ एक्लौटी अघि बढ्न खोजेको आरोप असन्तुष्ट पक्षले लगाउँदै आएका छन् । त्यसरी आरोप लगाउनेमध्येका एक हुन पंकज नेम्वाङ । उनीसँग गरिएको कुराकानी–
० वरिष्ठ उपाध्यक्ष मणि कुवरलाई दिँदा तपाईंलाई किन टाउको दुख्यो ?
– वरिष्ठ मात्र होइन, अर्को उपाध्यक्षमा समेत हामीले नोट अफ डिसेन्ट लेखेका छौं । यो विधानसम्मत भएन । एन्फाको विधानमा वरिष्ठ उपाध्यक्षको व्यवस्था छैन । त्यसैले विधान विपरित भयो भनेर मैले टाउँको दुखाएको छैन, असन्तुष्टि राखेको हो ।
० एन्फाका सीइओले त विधानअनुसार नै जिम्मेवारी दिइएको भन्नुभएको छ नि ?
– २०७० सालको विधानमा एउटा अध्यक्ष, एउटा वरिष्ठ उपाध्यक्ष, तीनजना उपाध्यक्षको व्यवस्था गरिएको थियो । तर संशोधित विधानको धारा ३१ को कार्यसमितिमा एकजना अध्यक्ष, चार उपाध्यक्ष र १२ जना सदस्यको व्यवस्था छ । मलाई देखाइ दिनुहोस् विधानमा वरिष्ठ उपाध्यक्षको व्यवस्था कहाँनेर छ ।
० नयाँ विधानअनुसार एन्फा किन नचलेको ?
– विधान फलो गर्नुभन्दा पनि विधानसम्मत चल्न नखोजेको देखियो । एक नम्बरमा उपाध्यक्षको मनोनय, दोश्रो नम्बरमा वरिष्ठ उपाध्यक्षको मनोनय भनेर छलफलको एजेन्डा थियो । त्यो विधान विपरित हुन्छ भनेर मैले समयमै सबैलाई सचेत गराएको थिएँ । एक्लौटी ढंगले विधानलाई मिचेर जुन कार्य भएको छ, त्यसमा हाम्रो असहमति रह्यो ।
० अब के गर्नुहुन्छ तपाईंहरु ?
– हामीले नोट अफ डिसेन्ट लेख्यौं, एएफसी र फिफामा पत्राचार गछौं । विधान आफ्नो हिसाबले व्याख्या गर्नु भएन । पहिले पनि आफ्नो अनुकूल व्याख्या गरिदै आइएको थियो । त्यसैको निरन्तरता यस पटक पनि भयो ।
० एन्फामा गणेश थापाको राज चलिरहेको संकेत हो यो ?
– म त्यही देखिरहेको छु । मणि कुँवर उपचुनावमा निर्वाचित हुनुभएको हो । उहाँभन्दा धेरै अगाडिका उपाध्यक्षज्यूहरु हुनुहुन्छ । उहाँहरुका बारेमा कुनै छलफल नै नगरी एक्लौटी ढंगले अध्यक्षले नाम प्रस्ताव गर्नुको अर्थ के हो ? निलम्बित अध्यक्षको सालो भनेर अध्यक्षले नाम प्रस्ताव गर्नु भनेको गणेश थापाकै निर्देशनमा एन्फा चलिरहेको रहेछ भन्ने कुरा देखियो नि । अर्को अचम्मको कुरा एएफसीको प्ले अफ म्याचमा थ्रीस्टार क्लबको सहभागिता समाप्त भयो । यो कुरा जोडदार रुपले मिटिङमा कुरा उठ्यो, सचिवालयको जिम्मेवारी महासचिवलाई दिइएको छ । हामीले महासचिवलाई सोध्दा एन्फाको इमेलको पासवर्ड मलाई थाहा छैन भन्नुभयो । पासवर्ड दुईजना कर्मचारीलाई मात्र थाहा रहेछ । ती कर्मचारी कसका पालामा आएका हुन् सबैलाई थाहा भएकै कुरो हो । अहिले भएका सबै कर्मचारी निलम्बित अध्यक्षका पालाका भर्ना भरिएको हो । यस कुरामा पनि निलम्बित अध्यक्षको भूमिका रह्यो भन्ने कुरामा हामीलाई शंका छ । हामीले निष्पक्ष छानबिनको माग गरेका छौं, एन्फाले एउटा समिति बनाएको छ । यद्यपि त्यो समितिमा हाम्रो पनि असहमति रह्यो । एन्फाले वरिष्ठ उपाध्यक्षको पत्र नै नदिइ कुँवरकै नेतृत्वमा छानबिन समिति गठन गरियो । त्यसकारण एन्फा पुरानै ढंगले अघि बढिरहेको छ ।
० थ्रीस्टारले खेल्न नपाउनु भनेको दुर्भाग्य होइन ?
– दुर्भाग्य मात्र होइन, कसको कमजोरीले यो घटना भयो । यो राष्ट्रघात हो । फुटबलमा लार्पवाहीले यस्तो मौका गुमाउनु भनेको चाहिँ नेपाली फुटबलप्रतिको घात हो ।
० यस्तो कुरामा किन एन्फा एक जुट नभएको ?
– थ्रीस्टारले खेल्न नपाएकोमा धेरै साथीहरुको एक मत रह्यो । एन्फाले मात्र छानबिन गरेर यो विषयको टुंगो लाग्दैन । नेपाल सरकार, खेलकुद मन्त्रालयले यसको निस्पक्ष छानबिन गर्नुपर्छ । र, दोषीलाई कारबाही हुनैपर्छ । अध्यक्षले क्षमा माग्दैमा फुटबलप्रतिको घाटा पूर्ति हुँदैन । दोषीले राजीनामा दिनुपर्छ भन्ने कुरा पनि आयो ।
० यो त समग्र टिमकै कमजोरी होइन र ?
– महासचिवले राजीनामा दिनुपर्छ, कर्मचारीलाई निलम्बन गरेर कारबाही अघि बढाउनुपर्छ भन्ने कुरा मैले राखे । महासचिवले मलाई इमेलको पासवर्ड थाहा छैन, मलाई पत्राचारबारे थाहा छैन भन्ने कुरा राख्नुभयो । एन्फाको इमेलको पासवार्ड कार्यसमितिका साथीहरुलाई थाहा हुनुप¥यो भनेर साथीहरुले कुरा राख्दा अध्यक्षले प्रतिवाद गर्नुभयो । दुईजना कर्मचारी एकजनाले पत्राचार हेर्नुहुन्छ, अर्काले टे«निङ हेर्नुहुन्छ, उहाँहरु बढी जिम्मेवार छन् । अध्यक्ष, महासचिव, र सीइओ बढी जिम्मेवार छन् । हामी त त्यहाँको निर्णयहरु पनि फेसबुकमार्फत् पत्रपत्रिकामार्फत थाहा पाउँछौं ।
० एक अर्कालाई दोष लगाएर नेपाली फुटबलको विकास कसरी हुन्छ ?
– हामीलाई विद्रोहीका रुपमा लिइएको छ, वास्तवमा हामी विद्रोही होइन । हामी फुटबल कसरी विकास हुन्छ भनेर लागेका हौं । आर्थिक पारदर्शीता, एन्फामा विधिको शासन हुनुप-यो, प्रशासनिक पारदर्शीता हुनुप¥यो भन्ने कुरा हामीले पहिलेदेखि नै उठाउँदै आएका हौं । यसो भन्दा व्यक्तिको विरोध हुँदैन । संस्थालाई सामूहिक नेतृत्वका रुपमा अगाडि बढाउने कुरा हो । यस्ता कुरा गर्दा हामीलाई विरोधी ठान्छन् भने हाम्रो भन्नु केही छैन । एक दिन हामी एन्फालाई विधिको शासनभित्र ल्याउँछौं भन्ने विश्वास छ ।
Tarun Khabar0response बुधबार,६ पुष २०७३ 827 Views